Vanhu vaviri vakafa muHyatt Ziva Riviera Cancun resort kupfura
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » mhosva » Vanhu vaviri vakafa muHyatt Ziva Riviera Cancun resort kupfura
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Caribbean • mhosva • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Mexico Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • Resorts • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Vanhu vaviri vakafa muHyatt Ziva Riviera Cancun resort kupfura.
State Secretariat of Public Security mudunhu reQuintana Roo muMexico yakati vanhu vaviri "vanofungidzirwa kuti vanotengesa zvinodhaka" vakaurayiwa asi vakawedzera kuti hapana vashanyi vakakuvara zvakaipisisa kana kupambwa.
Kupfurwa uku kwakashumwa padyo nehotera ye5-nyeredzi yeCancun neChina masikati.
Vaenzi vekutandarira vakamhanyiswa kunohwanda nevashandi veHyatt Ziva Riviera Cancun pakati pemishumo yekupfurana.
Nhau dzekuMexico dzakashuma kuti mumwe mushanyi akarapwa nokuda kwe“kukuvara kuduku” kusina kutaurwa pamusana pechiitiko chacho.
Kupfura kwakashumwa padyo ne5-nyeredzi Hyatt Ziva Riviera Cancun resort in Mekisiko neChina masikati.
Maererano nemishumo inopikisana, mumwe murume aiva nepfuti kana kuti mhondi dzakasvika panzvimbo iyi, nzvimbo inoshanyirwa nevanhu vokuAmerica, kubva kumhenderekedzo yegungwa iri pedyo ndokutanga kupfura.
Vaenzi nevashandi vakamhanyiswa kunovanda nevashandi pakati pemishumo yekupfurana.
Vaenzi vaitya vakatsanangura mumwe murume aiva nepfuti achisvika panzvimbo yakavanda kubva kumhenderekedzo yegungwa achivhura pfuti mumutambo wevolleyball. Pakave nemishumo yekuti mupfuri kana vapfuri vanga vakabata "pfuti yemuchina" pavakadzika panzvimbo yekutandarira.
Vanosvika vaviri vanofungidzirwa kuti inhengo dzechikwata vakaurayiwa mupfuti, The State Secretariat of Public Security in Mekisiko's state of Quintana Roo akadaro.
Maererano nevakuru vakuru vehurumende, vanhu vaviri “vanofungidzirwa kuti vatengesi vezvinodhaka” vakaurayiwa asi hapana vashanyi vakakuvadzwa zvakaipisisa kana kupambwa.
Muchuchisi mukuru wehurumende akazotsinhira kuti chiitiko ichi chaive mhirizhonga yezvikwata, achiti zvakaitika pamhenderekedzo yegungwa chinhambwe kubva panzvimbo yekutandarira.
Sekureva kwenhau dzenharaunda, mumwe mushanyi akarapwa “kukuvadzwa kudiki” kusingazivikanwe mushure mechiitiko ichi.
Muawa imwe chete mushure mepfuti, vaenzi vakabvumirwa kudzoka kunzvimbo inogamuchirwa yehotera.
Mutauriri we Hyatt Ziva Riviera muCancun vakati vashandi vepahotera "vakabva vatorana nevakuru venzvimbo" vanonzi vanga vari panzvimbo vachiferefeta.
Embassy yeUS mu Mekisiko yati yaitarisa nyaya dzekupfurwa kwacho.
Kupfurwa kwechikwata chinofungidzirwa kuti kune imwe nzvimbo yakakurumbira muTulum, anenge mamaira makumi masere kumaodzanyemba kweCancun, kwakasiya vashanyi vaviri vekunze vafa uye vamwe vatatu vakakuvara mwedzi wapfuura, mushure mezvo mauto eMexico akatumirwa kutsigira zviremera zvenzvimbo.
Zvakatevera nhevedzano yezviitiko zvine chekuita nechikwata mudunhu, kusanganisira kuurayiwa kwemupurisa mutaundi riri pedyo rePlaya del Carmen mukupera kwaGumiguru.